Al-shabaab Ayaa Xalay Weerar ku Soo Qaaday Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabelaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabelaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab xalay weerar ay ku soo qaadeen ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ee Hareeraha ka degan Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabelaha Dhexe.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay, kadib markii xoogag hubaysan oo Shabaab ka tirsan weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ay ku soo qaaden ciidamada sida uu sheegay Guddoomiyaha Degmada Aadan Yabaal.
Ciidamada Shabaabka ayaa dagaalka ku bilaabay qoriga Sabanka loo yaqaan oo ciidanka ay ku soo weerareen, kadibna waxaa xigay dagaal toos ah oo labada ciidan dhexmaray.
Gudoomiyaha Degmada Aadan Yabaal, Maxamuud Sheekh Xasan, ayaa sheegay inuusan garan karin dagaalkaasi Khasaaraha ka dhashay ee soo kala gaaray ciidamada Dowladda iyo kuwa Amiso, balse wuxuu sheegay in hada xaalada ay tahay mid degan oo shacabka ay dareemayaan nabadgelyo.
“Dagaal fool ka fool ayuu ahaa Sabano iyo Dabajeexyo ayeey ku soo weerareen ciidanka ayeey ku soo weyna ka kala carareen, marka xagooda wax dhintay qof sheegi karo ma jirto, Degmada dhexdeedana ma’aheyn halka lagu dagaalamay duleedka Degmada ayeey aheyd, Khasaare la iima soo sheegin.” Ayuu yiri Guddoomiyaha Degmada Aadan Yabaal.
Gudoomiyaha Degmada Aadan Yabaal, Maxamuud Sheekh Xasan, waxa kale uu sheegay intii ugu badneyd Bulshada Degmadaasi inay ka barakaceen, balse ay jiraan qoysas xoogaa is adkeeyay oo jooga Magaalada, kuwaasi oo caga badan aanan ku taagneyn.
Degmada Aadan Yabaal Al Shabaab waxa ay maamulayeen muddo sideed sano ah, dadka Degmadaasi ku nool ayaanan arkin mudadaasi nidaam Dowli ah iyo Askar Dowladeed, intaba balse Aadan Yabaal waxa ay gashay jawi ka duwan sidii hore.